भरतपुर अस्पतालमा बढ्दै गएको ‘असुहाउँदो’ राजनीति ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०१:५७ |
चितवन – चितवनमा रहेको भरतपुर अस्पताल सङ्घीय स्तरको अस्पताल हो । पछिल्लो समय यस अस्पतालमा असुहाउँदो राजनीति हावी हुँदै गएको छ । महत्वपूर्ण विभागमा ठाडो हस्तक्षेपले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ भने सेरेमोनियल पदमा रहेका अध्यक्षको कार्यकारी प्रस्तुति देखिएको भन्दै अस्पतालका डाक्टरहरु असन्तुष्ट छन् ।
अस्पतालमा एक वर्षमा तीन लाखभन्दा बढी बिरामीले उपचार पाउँछन् । काठमाण्डौको प्रसूति गृहपछिको नेपालमै सबैभन्दा बढी प्रसूति गराउने अस्पताल यही हो । यो अस्पतालमा एक वर्षमा १३ हजारभन्दा बढी गर्भवतीले बच्चा जन्माएको तथ्याङ्क छ ।
दुई वर्षअघि मात्र सङ्घीय अस्पताल भएको भरतपुर अस्पतालमा ६ सय शैय्या रहेका छन् । चितवनलगायत आसपासका १८ जिल्लाका बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको यो महत्त्वपूर्ण अस्पतालमा एक पक्षीय राजनीति हावी हुँदै जानुले अस्पतालप्रतिको साझा अपनत्व गुम्दै गएको छ ।
अध्यक्ष सेरेमोनियल कि कार्यकारी ?
पेशागत हिसाबले व्यावसायिक र क्षमतावान चिकित्सक डा. भोजराज अधिकारी अहिले अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँको नियुक्तिसँगै ‘राइट प्लेस राइट म्यान’को रुपमा लिएर खुशी हुनेहरु धेरै थिए । डा. अधिकारी अस्पताल विकास समितिका तर्फबाट कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।
अघिल्लो दिनसम्म सँगै काम गरेका आफूभन्दा तीन तहमाथिका चिकित्सकहरुलाई पछाडि पारेर अध्यक्ष भएपछि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुका बीचमा त्यतिबेलादेखि नै असमन्जस्यता पैदा हुनु स्वभाविक थियो । डा. अधिकारी आठौँ तहको चिकित्सक हुनुहन्छ, तर उहाँसँगै काम गर्ने ११ औँ तहसम्मका सिनियर चिकित्सक त्यहीँ काम गर्छन् ।
अध्यक्ष हुनका लागि योग्यता नपुगेको होइन । लामो समय सँगै काम गरेर बसेका चिकित्सकमध्येबाटै एकै पटक अध्यक्ष बनाइनुले केही असहजता देखिएको थियो । समितिका अध्यक्ष हुनुसम्मका लागि स्वभाविक मानेका अस्पतालका अन्य चिकित्सकले जब अध्यक्ष डा. अधिकारीको कार्यकारी प्रस्तुति देखिन थाल्यो, तब अस्पतालमा अध्यक्ष सेरेमोनियल हुने कि कार्यकारी हुने भनेर प्रश्न गर्न थाले ।
कोरोना अस्थायी अस्पतालका कारण भरतपुर अस्पतालका लागि अध्यक्ष हुन योग्य सावित भएर उदाएका डा. अधिकारी अस्पतालमा नीति निर्माण गर्ने र सहजीकरण गर्नका लागि सेरेमोनियल मात्र बन्नु भएन, कार्यकारी रुपमा नै प्रस्तुत हुन थालेको अस्पतालमै कार्यरत चिकित्सकहरु बताउँछन् । पेशागत रुपमा सम्मानयोग्य चिकित्सक भए पनि आवश्यकताभन्दा बढी राजनीति केन्द्रीत हुन थालेपछि डा. अधिकारीप्रतिको धारणा फेरिँदै गएको छ ।
त्यसो त डा. अधिकारी आफैं पनि बाध्यतामा हुनुहुन्छ । केन्द्रीय स्तरको अस्पताल बनेपछिको गठन आदेशमा अस्पताल विकास समितिको काम कर्तव्य र अधिकार परिवर्तन भएको अध्यक्ष डा. अधिकारी बताउनुहुन्छ । त्यही गठन आदेशअनुसार नै आफूले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । आफू प्राविधिक पनि भएकोले कतिपय विषयमा आफू मिडियामा धेरै देखिएकाले पनि कार्यकारी भए जस्तो बुझाइ हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संकटको समयमा अप्रत्याशित मेसु परिवर्तन
कोरोना कहरको समयमा अस्पतालमा अप्रत्याशित रुपमा मेसु परिवर्तन भए । डा. तिवारीलाई हटाइयो र नयाँ मेसु डा. राजन पाण्डेलाई ल्याइयो । यो संकटको समयमा पनि हतार गरेर आफू अनुकूलको मेसु खोजेरै ल्याउनु र योग्य मेसुलाई बीचमै बिदा गरिनुले मेसु नियुक्तिमा पनि असुहाउँदो राजनीति प्रष्ट देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पतालसम्बन्धी गठन आदेशमा भरतपुर अस्पताल सङ्घीय अस्पताल भएकोले मेसु होइन निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ । तर निर्देशकको रुपमा नभएर मेसुकै रुपमा डा. पाण्डेलाई ल्याइएको छ । डा. पाण्डेको प्रशासनिक कामको यो पहिलो अनुभव र नियुक्ति हो ।
यसअघि भरतपुर (अस्थायी) कोरोना अस्पताल भरतपुर महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न नसकेर भरतपुर अस्पताललाई जिम्मा लगाउँदै गर्दा सहज रुपमा स्वीकार नगरेको आरोप पनि उहाँलाई छ । महानगरकै नेतृत्वमा स्थापना भएको भरतपुर कोभिड प्रयोगशालाको स्थापनाका बेलाको खर्च भएको बिल भरतपुर अस्पतालका तर्फबाट तिर्न अस्वीकार गरेपछि डा. तिवारीको डा. अधिकारीसँगको दूरी बढेको थियो । डा. तिवारीले ल्याब स्थापना गर्दा राजनीतिक व्यक्ति र महानगरका कर्मचारीले आफूखुसी खरिद गरेका सामान अस्पतालको नियम विपरीत हुने भन्दै बिल तिर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
जब मेसु डा. तिवारीलाई हटाएर नयाँ मेसुको खोजी भयो तब अस्पतालभित्र नै काम गर्ने पूर्व मेसु डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम एउटा पक्षले मन्त्रालयसम्म लगेको थियो । पौडेल कांग्रेस निकट भएका कारण त्यो सफल हुन नसकेपछि नेपालगञ्जमा रहेका डा. पाण्डेलाई मेसुको रुपमा अस्पताल ल्याइएको छ ।
डा. पाण्डे नेकपा निकट, त्यसमाथि पूर्व माओवादी नजिकका भएकै कारण उहाँलाई रोजिएको हो । उहाँलाई अहिलेका अध्यक्ष डा. अधिकारीसँगको विचार मिल्ने र कुनै समय एउटै कोठामा बसेर अध्ययन गरेका साथीको रुपमा चिनिन्छ । भरतपुर अस्पतालमा सबैभन्दा लामो समय काम गर्ने मेसु डा. तिवारी दोश्रो रहेको र नेपाल सरकारको निर्णय भएका कारण यसमा आफूलाई जोडिरहन आवश्यक नभएको अध्यक्ष डा. अधिकारीले बताउनुभयो ।
विभागीय प्रमुख समेत आफू अनुकूल खोजिँदै
​अस्पतालमा विभिन्न विभाग रहेका छन् । भर्खरै अस्पतालको लेखा विभागमा समेत आफ्नो विचार मिल्ने व्यक्तिलाई ल्याउनका लागि अहिले भइरहेका व्यक्तिलाई सरुवा गरिएको भन्ने विषय अस्पतालमा चर्चा छ । अन्य विभागमा समेत सम्भव भएसम्म आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
अस्पतालमा अनावश्यक रुपमा कर्मचारी राख्नका लागि डा. तिवारीलाई ‘प्रेसर’ हुने गरेको र राख्न नमिल्ने अवस्था देखिएकाले उहाँले अडान लिएकै कारण सरुवा हुनुपरेको जानकारहरु बताउँछन् । डा. तिवारीलाई अध्यक्ष लगायतको टिमलाई नटेरेको भन्ने आरोप छ । स्टोर, फार्मेसीलगायत महत्वपूर्ण शाखामा ‘आफ्ना’ मान्छे राख्नका लागि लबिङ भइरहेको स्रोतले बतायो । यसले अस्पतालमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर बन्दै गएको छ ।
अस्पतालमा भएका विभिन्न विभागमा समेत अनुकूलता हेरी व्यक्ति परिवर्तन गर्न मेसुलाई ‘प्रेसर’ परेको र त्यही प्रेसरलाई नमानेका कारण उहाँलाई हटाइएको श्रोत बताउँछ । अ-प्राविधिक व्यक्तिहरुलाई अस्पतालमा कर्मचारीको रुपमा राख्नका लागि तत्कालिन मेसु तिवारीलाई ठूलै ‘प्रेसर’ थियो ।
अस्पतालमा विभागीय प्रमुख परिवर्तन हुने विषयको निर्णय अधिकार मेसुलाई हुने बताउँदै अध्यक्ष डा. अधिकारीले हरेक दुई वर्षमा लेखा प्रमुख परिवर्तन हुने प्रणाली नै रहेको दाबी गर्नुभयो । अन्य विभागमा योग्यता क्षमताका आधारमा व्यक्ति परिवर्तन हुनुलाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने उहाँको तर्क छ ।
कोभिड प्रयोगशाला प्रमुख समेत फेर्ने कसरत
भरतपुर अस्पतालले सञ्चालन गरेको कोराेना प्रयोगशालाका प्रमुख समेत आफू अनुकूलको राख्ने कसरत भइरहेको छ । प्रयोगशालाका प्रमुख डा. नितु अधिकारीलाई हटाएर अरु कोही पात्रलाई त्यहाँ जिम्मेवारी दिनका लागि प्रयास भइरहेको छ ।
डा. नितुलाई फरक आस्था राख्ने व्यक्तिको रुपमा लिएर हटाउन खोजिएको हो । प्रयोगशालाबाट आउने सूचना आफूलाई नदिएको भन्ने आरोप उहाँलाई लगाइएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष, मेसु र सूचना अधिकारीले पटक-पटक आफूलाई सूचना पहिला दिनुपर्ने भन्ने प्रेसर आएपछि डा. नितुले आफ्नै हस्ताक्षरमा सिधै प्रयोगशालाबाट सूचना जारी गर्दै आउनुभएको थियो ।
प्रयोगशाला निर्माणदेखि अहिलेसम्म भएगरेका आर्थिक कारोबारका विषयलाई आफू अनुकूल बनाउनका लागि प्रयोगशाला प्रमुख परिवर्तन गर्न खोजिएको स्रोतले बताएको छ । डा. नितुको कार्यकाल जम्मा दुई महिना मात्र बाँकी रहेको छ । डा. नितुसँगै प्रयोगशालामा कारारमा नियुक्ति पाएका अर्का व्यक्तिलाई डा. नितुको स्थानमा जान दबाब दिइएको भए पनि ती व्यक्तिले अस्विकार गरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ ।
प्रयोगशाला प्रमुखका विषयमा गुनासाहरु आएको त्यो आन्तरिक विषय भएको बताउँदै अस्पतालका अध्यक्ष डा. अधिकारीले अहिले प्रयोगशाला प्रमुखमा व्यक्ति परिवर्तन गर्ने विषयमा आफूले नसोचेको बताउनुभएको छ ।
सबै नयाँ काममा अलमल
अस्पतालको महत्वपूर्ण पदमा अहिले प्रायः नयाँ व्यक्ति छन् । अध्यक्ष डा. अधिकारी, मेसु डा. पाण्डे, लेखा प्रमुख सबै नयाँ छन् । आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै अस्पतालमा बजेट आउने क्रम जारी छ । तर आएका योजनाका प्रक्रिया र अन्य प्रशासनिक काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्यौल देखिएको छ ।
नयाँ स्थानमा नयाँ व्यक्ति आउँदा केही कुरा बुझ्न समय लाग्नुलाई अन्यथा लिन नहुने भन्दै अध्यक्ष डा. अधिकारीले अस्पतालको विकास निर्माण र प्रशासनिक कामका लागि कुनै अलमल नहुने दावी गर्नुभयो ।
Previousकेएल राहुलसँग हार्‍यो कोहलीको टिम, पन्जाब ९७ रनले विजयी
Nextप्रचण्ड सेट नै फेर्ने, ओली केहीलाई राख्ने पक्षमा
तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न काँग्रेसको आग्रह
१० पुष २०७३, आईतवार ०७:५४
सरकारले लगानी जुटाउन नसक्दा तामाकोशी जलविद्युत निर्माण अन्योल
७ आश्विन २०७६, मंगलवार ०३:४४
सांसदहरुको मासिक सेवा सुविधा २५ प्रतिशत बढ्ने
२४ जेष्ठ २०७३, सोमबार ०२:०८
आइतबार मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने,महिला र आदिवासीले स्थान नपाउँने
३० श्रावण २०७३, आईतवार ०२:४६